Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare oo ka warbixiyey waxqabadka Wasaaradda Bishan. | Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare
Posted on September 24, 2014 by moche
Shir ay isugu yimaadeen hawlwadeenka wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare uuna shir gudoominayey wasiir ku xigeenka wasaaradda ayaa ka dhacay 23/9/2014 kaasi oo diiradda lagu saaray soo bandhigidda waxqabadkii wasaaradda bishan aynu ku jirno iyo qorshaha horyaala bisha soo socota.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare Xildhibaan Maxamed Axmed Kulan ayaa hawlwadeenka wasaaradda usoo bandhigay isku duub waxa bishan wasaaradda uqabsoomay waxaana uu xusey in bishan oo kaliya ay wasaaraddu qabatay hawlo aad u adag oo guulo qiimo leh lagu tilmaami karo waxaana ka mid ah :
1- 21/9/2014 wasaaraddu waxay ku guuleysatay in ay dadkii degenaa ka saarto xaruntii maktabadda Qaranka oo in muddo ah deegaan bulsho iska ahayd.
2- 23/9/2014 Waxaa la qaabeeyey nidaamkii lagu maareyn lahaa deeqda waxbarasho ee wasaaraddu ka heshay dalka Ciraaq oo diiwaangelinteeda maanta la bilaabay.
3- 23/9/2014Waxaa bilaabatay hawl adag oo ku aadan sidii loo baneyn lahaa xaruntii Akademiyadda Fanka iyo Suugaanta.
5-14/9/2014 Waxaa golaha wasiirada la horgeeyey barnaamij la xiriira bandhig Faneedka Dhaqanka Soomaaliyeed kaasi oo helay kalsoonida golaha wasiirada lana meelmariyey.
6-19/9/2014 Wasaaraddu waxay kormeer ku samaysay qaabkii imtixaanka jaamacadda Ummada Soomaaliyeed loo maareeyey.
7-Waxaa la bilaabay bishan gudaheeda qorshe la xiriira sidii siyaasad tacliin sare oo qaran loo heli lahaa iyo guddiga qaranka ee Tacliinta Sare waxaana shirar wada tashi ah oo la xiriira arrintaas lala qaatay qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ka hawlgala.
8- 07/9/2014 waxaa dhacday xaflad ballaaran oo ay kasoo qeybgaleen inta badan xubnaha golaha wasiirada iyo bulshada rayidka taasi oo xarrigga looga jarey xarunta wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare oo muddo 22 sano ah ahayd goob garaash ah waxaana xarigga ka jarey ra’isulwasaare ku xigeenka Ridwaan Maxamed Xirsi.
Intaa ka dib wasiir ku xigeenku waxa uu si aad ah u amaaney hawsha adag ee wasaaraddu hayso isagoo ku booriyey hawlwadeenka wasaaradda in ay la yimaadaan hal abuur ku aadan horumarinta shaqada iyo tayada shaqaalaha.